प्रधानमन्त्री ओली र प्रभु साहबीच विवाद बढ्दै, साहले एमाले छोड्लान ? · JanakpurPress
२०७८ असार ६, आईतवार ०७:२७ गते
काठमाडौं : विगत लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिदै आएका माओवादी नेता प्रभु साह र प्रधानमन्त्री बिचको सम्बन्ध अहिले चिसिएको छ ।
हिजोसम्म प्रधानमन्त्रीको अति प्रिय रहेका प्रभु साह आज किन एकाएक अप्रिय भए ?
आखिर के भयो त्यस्तो कि मधेशका एक सशक्त नेताको रुपमा चिनिएका प्रभु साह र प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्धमा दरार आयो ?
यी मागहरुका विषयमा केपी ओली र प्रभु साह बीच पटक पटक वार्ता भयो ।
कतिपय वार्तामा रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीसहितका माओवादी नेताहरुको पनि सहभागिता थियो, तर प्रगति भने खासै हुन सकेन । आफ्नो मागको ठोस सम्बोधन नहुँदासम्म अगाडी बढ्न नसक्ने अडान प्रभु साहको थियो ।
प्रधानमन्त्री स्रोतले भन्यो, “एमाले ब्युतेपछि पार्टीको निर्णय पुस्तिका (माईन्युट) मा प्रभु साहले हालसम्म पनि हस्ताक्षर गर्न नमाने पछि प्रधानमन्त्री ओली झन क्रुद्ध हुनुभयो ।”
“जहाँसम्म जबजको कुरा हो यो त प्रचण्डले समेत मानिसकेको र हिजो उहाँको फेस-सेभिङको लागि मात्र हामीले जनताको जनवाद भनेका थियौं। त्यसैले यस्तो विषयमा अविश्वास नगर्न माओवादी पक्षलाई बुझाउने कोशिश नगरेको पनि हैन; यति गर्दा पनि न भए हामी के गर्न सक्छौ ?” एमालेका एक नेताले भने । राजधानी दैनिक